News Code : 652932
အလီအဗ်နေအဘီသွာလစ်ပ်(အ.စ)အဘယ်ကြောင့်တမန်တော်မြတ် ကြီး(ဆွ)၏ (وصی)ဝစီနှင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ရပါသနည်း?
ဤအတွက် အဖြေအား အောက်ပါအတိုင်း လေ့လာနိုင်ပါသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)ကိုမလွဲ၊မသွေအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကိုယ် တိုင်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခဲ့ပြီး၊မိတ်ဆက်ကြေငြာပေးခဲ့သလို၊ကိုယ်တော်၏ဝစီ (وصی)ကိုယ်စားလှယ်တော်ကိုလည်းပဲအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ရွေး ချယ်မြှောက်စားသတ်မှတ်ပေးရပေမည်။
ဤဖြစ်ရပ်မှန်အတွက်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဘဝသမိုင်းကိုယ်တိုင်အသိသက် သေအဖြစ်တည်ရှိနေပါသည်။အကြောင်းသည်ကား-ကိုယ်တော် (ဆွ)ကိုယ်တိုင်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အားအကြိမ်ပေါင်းများစွာမိမိခလီဖွာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ကြောင်းသတ်မှတ်ကြေငြာပေးခဲ့သည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အားအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ဘက်မှမိမိ၏ဆွေမျိုးသားချင်းများကိုဤအာယတ်တော်အတိုင်း( وَانذِرْ عَشِیرَتَکَ الْاقْرَبِینَ)အတိုင်း တစ်ဆူတည်းတစ်ပါးတည်းအရှင်၏ဥပဒေစည်းမျဉ်းဘက်သို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါ သည်။ တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အနေဖြင့်ကြွရောက်လာသော(ဆွေမျိုးသားချင်း)လူစု၊လူဝေးအားမိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ-
فأیکم یؤازرنی فی ھذاالأمر علی أن یکون أخی و وزیری و خلیفتی و وصیی فیکم
ဤကောင်းကင်တမန်များယူဆောင်လာသောသတင်း၊ တမန်တော် မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ဖိတ်ခေါ်မှုအသံအပေါ်အလီအဗ်နေအဘူသွာလစ်တစ်ပါး တည်းသာလျှင်ကူညီဖို့အသင့်ရှိ ကြောင်းအဖြေပေးခဲ့လေသည်။
اِن ھذا أخیی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و أطیعوہ
အသင်တို့အကြားရှိဤပုဂ္ဂိုလ်အလီ(အ.စ)သာလျှင်ကျွန်ုပ်၏နောင်တော် ဝစီ(وصی) ကိုယ်စားလှယ်တော်ဖြစ်ပေသည်။၎င်း၏စကားကိုနားထောင်ကြပါ လေ။၎င်း၏နောက်လိုက်နောက်သားများဖြစ်ကြပါစေ။
أما ترضی أن تکون منیی بمنزلة ہارون من موسیٰ اِلا أنّه لا نبی بعدی
ဆိုလိုသည်ကား-ဟဇရတ်(သ)ဟာရွမ်(အ.စ)သည်ဟဇရတ်(သ)မူစာ (အ.စ)၏ဝစီ (وصی)နှင့်ကိုယ်စားလှယ်ဗေလာဖွစ်ဖြစ်သကဲ့သို့၊အသင်အလီ (အ.စ) သည်လည်းပဲကျွန်ုပ်၏ခလီဖွာနှင့်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပေသည်။
ဗေလာဖွစ်(بلا فصل)ဆိုသည်ဟဇရတ်(သ)မူစာ(အ.စ) ဝဖာသ်ဖြစ်ပြီး နောက်ချက်ချင်းဟဇရတ်(သ)ဟာရွမ်(အ.စ)ခလီဖွာဖြစ်သကဲ့သို့၊
မွတ်စလင်လူထုကြီးအကြားဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အားမွတ်စလင် များနှင့်မိုမင်များ၏ဝလီအဖြစ်သတ်မှတ် မိတ်ဆက်ပေးပြီးမိန့်တော်မူသည်မှာ-
مَن کنت مولاہ فھذا علّی مولاہ
ألستُ أولیٰ بکم مِن أنفسکم؟
အဓိပ္ပါယ်။ ။ကျွန်ုပ်(မိုဟမ္မဒ်)သည်အသင်တို့အပေါ်အသင်တို့ထက်ပို၍အ သုံးပြုခွင့်မရှိပါသလော?
ဆိုလိုသည်မှာ-မိုမင်သည်မိမိကိုယ်တိုင်မပိုင်ချေ။သို့သော်တမန်တော်မြတ် (ဆွ)ပိုင်ပေသည်။အဓိပ္ပါယ်က-ကိုယ်ထင်ရာမဆိုင်းဘဲ၊ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ) ၏အမိန့်အတိုင်းလုပ်ရန် ဖြစ်ပေသည်။(မြန်မာဘာသာပြန်)
အနှစ်ချုပ်ပြောရလျှင်တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)သည်ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သောကြောင့်အခွင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိသကဲ့သို့ပင်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)သည် လည်းဖြစ်ကြောင်း သက်သေဖြစ်သွားပေသည်။
ینادیھم یوم الغدیر نبیُّھم بخم واسمع بالرسول منادیا
فقال فمن مولاکم و نبیُّکم ؟ فقالوا ولم یبدوا ھناک التعامیا
الھک مولانا و أنت نبیُّنا و لم تلق منا فیِ الولایة عاصیا
فقال له قم یا علی فاننی رضیتک من بعدی اِماما وھادیا
فمن کنت مولاہ فھذا ولیه فکونوا لہ أتباع صدق موالیا
وکن للذی عادیٰ علیاً معادیا ھناک دعا: اللّھم وال ولیه
အဘူဂျဖရ်ကျော်ကြားသောအစ္စလာမ်သမိုင်းသုတေသီအနေဖြင့်ဤဟဒီးစ်(ဂဒီးရ်)အတွက်အထောက်အထားကိုစာအုပ်ကြီးနှစ်တွဲအဖြစ်ရေးသားစု စည်းခဲ့ပါသည်။ပိုမို၍သိရှိ ရန်အတွက်(الغدیر)ကျမ်းကိုလေ့လာသင့်ပေသည်။